Taliyihii sirdoonka maamulkii Cabdi Illay oo loo gacan-gelinayo Itoobiya
Ciidamadda Somaliland ayaa magaaladda caasimada ah ee Hargeysa ku qabtay eedeysanahaan.
HARGEYSA, Somaliland – Taliyihii sirdoonka maamulkii Cabdi Illay ayaa lagu xiray Hargeysa, xarunta Somaliland, sidda ay qortay warbaahinta. Mukhtaar Sheekh Subane waxaa la filayaa in Itoobiya lagu wareejiyo.
Maxamed Colaad, lataliyaha arrimaha warbaahinta madaxweyne Mustafa Cagjar, ayaa sheegay in Mukhtaar lagu qabtay kadib macluumaadyo ay is-dhaafsadeen Somaliland iyo ismaamulka Soomaalida.
Suubane ayaa wajahaya eedeymo ay kamid yihiin; dil wadareed, afduub iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Si gaar ah waxaa loo haystaa weeraro lagu beegsaday Kaniisado ku yaala Jigjiga intii ay socdeen rabshadihii keenay in uu xafiiska baneeyo Illay.
Mukhtaar Suubane oo horey uga tirsanaa ONLF ayaa kadib isku dhiibay ciidamadda degaanka, wuxuuna kamid noqday saraakiisha ugu sareysa ee Liyuu Boolis kahor inta aan taliska sirdoonka loo dalacsiin.
Dacwad-oogaha guud ee Itoobiya ayaa Mukhtaar ku daray liiska shaqsiyaadka uu doonayo kadib markii uu is-casilay Cabdi Illay.
Bilo kahor ayay ahayd markii Xasan Dheere, taliyihii hore ee Jeel Ogaadeen lagu qabtay Puntland.
Sikastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta ismaamulka degaanka ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay sarre u qaadey baacsiga xubnaha looga shakisan yahay in ay degaanka ka geysteen xadgudubyadda iyo xasuuq wadareedka.
Abiy oo "ku cadaadinaya" Somaliland in uu Farmaajo ka dego Hargeysa
Somaliland 16.02.2020. 12:26
Tani ayaa imaaneysa iyadoo ay jiraan warar isa soo taraa oo ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu ku wajahan halkaas.
Wasiiro katirsanaa Xukuumaddii Cabdi Illey oo lagu xiray Somaliland
Somaliland 23.08.2018. 11:13
Somaliland oo go'aan ka qaadatey Wadahadalka dowladda Federaalka [Daawo]
Somaliland 04.12.2018. 09:45
Warbaahinta Turkiga oo meel kaga dhacday qaranimadda Soomaaliya
Soomaliya 18.04.2020. 08:30
Somaliland: Qalbi Dhagax oo lagu soo dhaweeyay Hargeysa
Somaliland 25.09.2018. 12:37
Somaliland oo shaacisay go'aano cusub oo ay kasoo saartay Covid-19
Somaliland 26.03.2020. 18:50
Madaxweyne Farmaajo oo "xoojiyey" tuhun laga qabay dowladiisa
Soomaliya 18.02.2020. 07:00